MAZE Alpha International Bixinta | Androidsis
MAZE Alpha International Bixinta
Francisco Ruiz | | Dood-wadaag, Aaladaha Android
Waxaan kusoo laabaneynaa terminal cusub oo Android ah oo loogu talagalay Isku aadka Caalamiga ah, markanna MAZE Alpha tartanka adduunka Waa maxay wax yar oo fiican halkan ku yaal Androidsis aan sameyno sanduuqa y dhamaystiran fiidiyowga dib u eegistiisa.
Hadaad tan rabto MAZE Alpha adiga ha kuu ahaato weligiis, gebi ahaanba bilaash xitaa kharashka dhoofinta ee ay bixiso Androidsis, markaa waad ogtahay, kaliya waa inaad gujisaa «Sii wad aqriso qoraalkan».
Hadaad rabto inaad sifiican u ogaato sida kaqeybgal MAZE Alpha International giveaway Waxaan kugula talinayaa inaad fiiriso fiidiyowga ku lifaaqan ee aan kaaga tagay bilowga maqaalkan, maaddaama ay ku jirto waxaan si faahfaahsan u sharraxayaa sida looga qaybqaato isku aadka caalamiga ah ee MAZE Alpha ee aan nahay, laga bilaabo maanta iyo illaa Axada soo socota, Oktoobar 8, 2017 markay tahay 23:59 pm, waxay ku sawireysaa Androidsis.
Sida loo galo MAZE Alpha International giveaway
Si aad uga qaybqaadato MAZE Alpha tartanka adduunka, terminaal shaqsiyan aan ujeclaa kadib toban maalmood oo adeegsiga degdegga ah, waxaa lagaa doonayaa oo keliya inaad buuxiso laba shuruudood. Dabcan kan ugu horreeya oo sida caadiga ah waxaa lagu sameeyaa kiisaskan waa in lagu qoro kanaalka fiidiyoowga ah ee 'Androidsis' ee YouTube-ka, ama wixii isku meel ku yimaada lagu qoro Androidsisvideo.
Shuruudda labaad ee qasabka ah ee kiiskan sidoo kale iyo abaalmarin loo helo in ka badan 4400 xubnood oo aan hore ugu haysannay bulshada 'Androidsis' ee Telegram, beel ka jawaabta magaca @AndroidsisGroup, waa taas ku soo biir bulshada oo ka qaybgal xitaa haddii ay tahay oo keliya adigoo salaan u diraya bulshada oo dhan ama isbarashada naftaada ama tusaale ahaan inaad dhahdo waxaad dooneysaa inaad ku guuleysato MAZE Alpha ee Androidsis ay qallajiso.
Taasi waa waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso u qalma abaalmarinta ugu dambeysa ee 'MAZE Alpha', inkasta oo lagu daro iyo ikhtiyaar ahaan si aad u hesho qoraallo badan oo ku jira isku aadkaAynu tagno waxa ka badan dhibcaha ama warqadaha codbixinta! Tan awgeed waxaad sidoo kale yeelan doontaa xulashooyin aad ku martiqaadi karto saaxiibbadaada inay kaqeyb qaataan, arag fiidiyowga dib u eegistayada 'Maze Alpha', ku soo biir Waxay bixisaa iyo kanaalka raffles ee aan ku hayno Telegram halkaas oo aad ka heli doontid dalabyada ugu fiican xagga teknolojiyadda iyo sidoo kale marin toos ah iyo gacan-ku-helida badan ee raffleyaasha aan ka fulino Androidsis.
Halkan waxaa ku yaal badhan aad si toos ah uga soo gasho bogga internetka ee Gleam.io oo ah halka aan ku qaban doonno isku aadkaan caalamiga ah ee loogu talagalay MAZE Alpha, isla midka aan u isticmaalno dib u eegista fiidiyowga ee terminal-ka oo shaqsiyan igu reebay jacayl lumay.
Xusuusnow inaad ku soo gasho koontadaada Google si aad awood ugu yeelato inaad uga qayb gasho si sax ah si, haddii aad tahay kuwa guuleysta ee nasiibka leh, aan kula soo xiriiri karno.
Waxaa xusid mudan in guuleystaha isku aadka lagu daro noqo xubin ka mid ah kanaalka 'Androidsis Youtube' kana mid noqo barnaamijka 'Androidsis Group' ee Telegram oo aad ka qayb qaadatay taas oo aan si fiican u eegi doonno, marka lagu daro Waa inaad ka jawaabtaa e-maylka loo diri doono si aad u dalbato abaalmarintaada 48 saacadood gudahoodHaddii 48 saacadood ka dib aan la sheegan abaalmarinta, qofka guuleystaha ah waa la burin doonaa oo waxaa la dooran doonaa guuleyste cusub, kaasoo isagana helaya 48 saacadood oo uu ku dalbado abaalmarintooda.
MAZE Alpha giveaway
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Dood-wadaag » MAZE Alpha International Bixinta
Daniel de la Torre Nores dijo
Waxay ila tahay aniga mobiil weyn, waxa tayada / qiimaha ku jiray.
Jawaab ku siiya Daniel de la Torre Nores
Ugu badan !! Waxaan rajeynayaa hadda inaan ku guuleysto….
Jawaab Julian Ns
fernando solis dijo
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa terminal aad u fiican, waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysto
Jawaab Fernando Solis
Alain Rashilla dijo
Waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysto tartanka!
Jawaab Alain Rasilla
Juan A. Fuentes dijo
Waad salaaman tihiin, Telegram-ka looma ogola dadka indhoolayaasha ah ee isticmaala shaashadda akhristayaasha, ma ahan cadaalad, waad na faquuqaysaan.
Jawaab Juan A. Fuentes
Marka ugu horeysa ee aad ufiican ee aan halkaan soo galo iyo qafiska casriga ah ayaa umuuqda mid aad u wanaagsan
Jawaab ku sii Yunior
Hagaag nasiib wacan qof walba
Joaquin Ximo dijo
mobile wanaagsan iyo barbaro wanaagsan, weyn
Jawaab Joaquin Ximo
mobile fiican iyo wax fiican oo wax siiya
Laly diaz dijo
Wanaagsan !!. Waad ku mahadsan tahay bixinta!
Jawaab Laly Diaz
4 ciyaarood iyo barnaamijyo cusub si usbuuca farxad loogu bilaabo